Tun Tun's Photo Diary: January 2016
2013-Mar-27, Singapore ကနေ Malaysia နိုင်ငံရဲ. Kota Kinabula မြို.ကို Air Asia လေယာဉ် နဲ. ရောက်သွားပါတယ်။ Malaysia နိုင်ငံက ကျွန်း ကြီး ၂ခု ရှိပါတယ်။ Singapore နဲ. နီးတဲ့ ကျွန်းကြီး တခုရယ်။ Brunei နိုင်ငံနဲ. ကပ်လျှက်ရှိတဲ့ ကျွန်းကြီးရယ်။ ဒီဘက်က ကျွန်းရဲ. မြို.တော်က Kuala Lumpur ဖြစ်ပြီး ၊ ဟိုဘက်က ကျွန်းရဲ. မြို.တော် က Kota Kinabalu ဖြစ်ပါတယ်။ Kota Kinabalu ဘက်ကိုလာတဲ့ သူတွေ တော်တော်များများ က Mount Kinabalu တောင်ကိုတက်တဲ့ သူတွေ များပါတယ်။ Mount Kinabalu ကို မလေးရှားမှာ အမြင့်ဆုံး တောင်လို. ပြောကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို. ခရီးစဉ်မှာတော့ တောင်တက်ဖို. အစီအစဉ်မပါဘူး။
at 1/31/2016 01:38:00 PM Links to this post No comments:
Labels: Flower, Kota Kinabalu, Landscape, Malay Food, Malaysia
Merlion and Marina Bay Sand, Sunrise
2013-Jun-02, စင်ကာပူဓါတ်ပုံ လို. ဆိုလိုက်တာနဲ. Merlion ပုံတွေ၊ Marina Bay Sand ဓါတ်ပုံတွေ ချည်းပဲ တွေ.ရပါလိမ့်မယ်။ လူတိုင်း ဒါတွေ ပဲ ထပ်ခါ ထပ်ခါ ရိုက်နေတော့ ကြည့်ရတဲ့သူတွေလဲ ရိုးအီနေပြီ။ ဒါကြောင့် နည်းနည်းလေး အပြောင်းအလဲ ဖြစ်သွားအောင် လူ တော်တော်များများ ရိုက်တဲ့ အချိန်မဟုတ် တဲ့ Sunrise ချိန်ထပြီး ဓါတ်ပုံသွားရိုက်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။
at 1/13/2016 09:01:00 PM Links to this post 1 comment:
Labels: Architect, Landscape, Singapore, Sunrise
2012-Aug-13, Marnia Bay Sand Skypark ကို ပထမအကြီမ် ရောက်ဖူးတာပါ။ ဒီဟိုတယ် ဖွင့်ပြီးကတည်းက လူတွေ သွားတည်းတဲ့ပုံတွေ၊ Infinity Pool မှာ ရေကူးတဲ့ ပုံတွေ fb မှာ တင်ထားတာတွေ.တော့ ကိုယ်တိုင်လည် သွားဖူးချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် သူများတွေလို ဟိုတယ်မှာ မတည်းနိုင်တော့ Skypark ကိုသွားတဲ့ လက်မှတ်နဲ.ပဲ ဟိုတယ် အပေါ်ကိုသွားခဲ့ပါတယ်။
at 1/09/2016 04:55:00 PM Links to this post No comments:
Labels: Landscape, Night, Singapore
Bintan, Indonesia (2 Days 1 Night) #2
2012-May-05, ည ရနာရီခွဲလောက်မှာ Agro Resort ကနေ Batam Night Market Tour နဲ. ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီTour က တစ်ယောက်ကို S$10 ပေးရပါတယ်။ တကယ်တော့ Agro resort ကနေ ညဈေးဘက်ကို တော်တော်လေး သွားရတယ်။ ၄၅ မိနစ်လောက် ကားနဲ. သွားရတယ် ထင်တာပဲ။ ညဈေးမရောက်ခင် အရင်ဆုံး Souvenir shop တခုကို အရင် ပို.ပါတယ်။ အင်ဒိုနီးရှား ပါတိတ်တွေ၊ လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေ ရောင်းတဲ့ဆိုင်ပါ။
at 1/03/2016 11:55:00 PM Links to this post No comments:
Labels: Bintan, Indonesia, Indonesia Food, Sunrise